Archive du 20190522
Andry Rajoelina Nandika lalàna fanindroany…
Mazava ny zava-misy fa tsy mahatoky tena i Andry Rajoelina sy ny kandida depioten’ny IRD ka manomboka manararao-pahefana sy mitady ny hevitra rehetra hibatana ny fandresena.
Fifidianana Depiote Toamasina I Tsara toerana ny kandidan’ny TIMK25
Mitohy ny fitsidiham-paritra sy fampielezan-kevitra ataon’i Marc Ravalomanana, ka toerana maro no nandehanany ny fiandohan’ny herinandro teo, toa an’i Tsiroanomandidy, Mahavelona, Mahasolo, Ankadinondry Sakay, …
Tiako i Madagasikara Hitory an-dRajoelina…
Miandry izay ho fihetsiky ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) sy ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny Antoko Tiako I Madagasikara manoloana ny propagandy ankolaka ataon’ny filoha manohana ny kandidan’ny IRD.
Filoha sy Praiminisitra Anaty ady mangatsiaka ?
Ireo toerana hitany fa tena malemy na mety ho resy ny kandidany no hanaovan’i Andry Rajoelina propagandy an-kolaka, toy ny tao Tsiroanomandidy sokajiana ho tokotanin’ny TIM.
Fandikan-dalàna anaty fifidianana Miandry ny CENI sy HCC hihetsika
Ny 17 mey teo no nanamarika ireo komity mpanara-maso ny sata mifehy ireo kandida ho depiote nampanao sonia ilay antsoina hoe “Toky nomena”
Aferana Boaderozy 27 740 isa Lasa any Singapour ny minisitra Georget
Lasa any Singapour nanomboka ny 17 mey teo ny minisitry ny tontolo iainana Alexandre Georget, ary hiverina eto ny zoma 24 mey 2019.
Raharaham-pitsarana Olala Andrasana hivaly rahampitso
Rahampitso no andrasana hivaly ny raharaham-pitsarana mikasika ilay fitoriana miisa 4 niampangan’ny avy eo anivon’ny olafitry ny
Foiben’ny Antoko HVM Lasan’ny fiangonana FVKFM
Lasan’ny fiangonana FVKFM ny foiben-toeran’ny antoko HVM tetsy Antanimena, ary efa nohavaozina sy niova loko tanteraka.
Firenena afrikanina mpamokatra solika Hihaona amin` ny volana novambra
Minisitra miisa 17 avy amin`ireo firenena tena mpamokatra angovo eto Afrika no hihaona mandritra ny hetsika “Herinandron`ny solika” any Cap-Vert ny 4 ka hatramin'ny 8 novambra 2019.
Kolikoly sa gaboraraka Gadra mandra-pahafaty 2 lahy tafavoaka ny fonja
Tafatsoaka ny fonjan’i Vohitany kaominina Ejeda Toliara ny alin’ny zoma 17 mey i Alain Zaheraly Rostand na Karana sy Eric Mario na Rambô.
Karate-Do Tonga eto Madagasikara omaly ny delagasiona Tiorka
Nigadona teto Madagasikara omaly talata 21 mey 2019 ny delegasion’ny taranja karate avy any Tiorka tarihan’ny filohan’ny “Fédération Turque de karaté,
CAN EGYPTE 2019 Nivoaka ny Mascotte « Sary famantarana »
Iray volana katroka aty alohan’ny hanombohan’ny andiany faha-32 amin’ny fifaninanana baolina kitra Afrikanina CAN 2019 hotontosaina
Mpanazatra mpanampy ao amin’ny Barea Miteraka adihevitra be
Nigadona omaly teto Madagasikara ny mpanazatra voalohany ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na ny Barean’i Madagasikara, Nicolas Dupuis.
Ny lohany indray no matsatso
Toa mbola tsy mahatsapa ho filohan’ny Malagasy rehetra ny Filoha ankehitriny, ka sady manao propagandy ho an’ny tenany no mampandany ankolaka ireo kandidan’ny IRD.
CUA sy ireo mpitatitra Nifanaiky ny maha zava-dehibe ny fanarahan-dalàna
Notontosaina omaly teny amin’ny Biraon’ny « Contre visite » Antsakaviro ny fivorian’ny Kaominin’Antananarivo Renivohitra (CUA) notarihin’ny Tale misahana ny fitaterana sy fivezivezena an-tanàn-dehibe,
Tarika ny Ainga Notolorana mari-pankasitrahana
«Tena faly noho ny fankasitrahana azon’ny tarika avy amin’ny fiangonana. Sady fahasoavana izany no mipetraka ho tantara fahatsiarovana», hoy i Luc Marie Rabesaiky, mpitondra ny tarika Ny Ainga.
Taom-baovao Malagasy Manaiky ilay daty 22 septambra ny ankamaroan’ireo fikambanana
Amin’ny ankapobeny, tsy miova ilay datin’ny 22 septambra hanatanterahana ny taom-baovao iraisan’ny Malagasy rehetra hatao any Toamasina amin’ity taona ity.
Toamasina Tratra ireo namaky ny “Accès banque” sy namono polisy iray
Saron’ny polisy ireo telolahy namaky ny “Accès banque” tao Toamasina sy ilay lehilahy iray tompon’antoka tamin’ny famonoana polisy iray nitranga tany an-toerana ny 06 janoary lasa teo.
Mpiambina ny orinasa lehibe an’ny karàna etsy Andaharo no nisy nanindrona antsy teo amin’ny tendany.
Miha mafana amin’izao fotoana ny propagandin’ny fifidianana ho depiote. Maro ireo kandida manakiana ny fitondrana ankehitriny manoloana ny fitanilana miseholany ataon’ny filoham-pirenena.
Fifidianana Eoropeanina Miezaka mafy hampandany ny olony i Emmanuel Macron
Tandindomin-doza ary atahorana ho vaky ny vondrona eoropeanina, hoy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ka tsy afaka ny hitazam-potsiny izahay fa tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra.
Orinasa Sinoa Huawei Nohalefahan’ny Amerikanina ny ankivy natao taminy
Nohalefahan’ny Amerikanina ny ankivy nampihariny tamin’ilay orinasam-pifandraisan-davitra Sinoa Huawei, herinandro taorian’ny fanambarana nataon’i Donald Trump.
BANKY BNI Hanampy ireo mpandraharaha ho avy eny amin’ny FIM
Hotanterahina manomboka rahampitso alakamisy 23 mey eny amin’ny Forello expo Tanjombato ilay hetsika “Foire Internationale de Madagascar”, karakarain’ny agence de communication la premiere ligne.
Faritra eto Antananarivo Tena mijaly rano
Faritra 5 manodidina an’Antananarivo izay tsy mahazo rano no hisitraka voalohany ny fotodrafitrasa famokarana rano vaovao eny Ambohimangakely.
Ampasampito Zaza roa volana narian-dreniny
Zaza menavava iray manodidina ny roa volana omaly maraina no narian-dreniny teny amin’ny toby fiantsonan’ny taksibe teny Ampasampito.
Taksibe F nandona olona teny Anosy Efa karohan’ny mpitandro filaminana
Niforitra tanteraka ny kodiarana aorian’ilay bisikleta, nidaraboka tamin’ny arabe ilay tovolahy ary tena voa mafy ny tongony.
Sehatra fananan-tany Aparitaka manerana ny nosy ny torolalana
Ilaina ny torolalana amin’ny tokony ho fantatra momba ny fananan-tany eto Madagasikara.
Fifandonana tany Miandrivazo Mbola ao anaty lohan’ilay Lietna ny bala
Risika ny fandidiana ilay manamboninahitra voatifitra hanalana ilay bala ao anatin’ny lohany izay manakaiky ny betro.
Jiolahy any Manja Manao fanamiana miaramila ary mitondra fitaovam-piadiana
Nandritry ny fanarahan-dia no nahatraran’ny polisy sambo-belona an’i Vaika, jiolahy raindahiny, tafaporitsaka kosa ny namany efatra. Nitondra fanamiana miaramila sy basy ilay malaso ny alahady teo.